2 Tantara 14 - Ny Baiboly
2 Tantara toko 14
Asà mpanjakan'i Jodà - Ny nandreseny an'i Zarà, Etiopiana.
1Nanao izay tsara sy mahitsy eo imason'ny Tompo Andriamaniny, Asà. Nandrava ny otelin'ny olona hafa firenena sy ny fitoerana avo izy, 2ary nanorotoro ny tsangambato sy ny aserah. 3Nandidy an'i Jodà mba hitady an'ny Tompo Andriamanitry ny razany, sy hanatanteraka ny lalàna aman-didy. 4Dia nesoriny ny fitoerana avo sy ny sariolona, teo amin'ny tanànan'i Jodà rehetra, ka dia nandry fahizay ny fanjakana teo anatrehany.
5Nanao tanàna mimanda tamin'i Jodà izy, fa nandry ny tany, ary tsy nisy ady namely azy tamin'izany taona izany, satria nomen'ny Tompo fitsaharana izy. 6Izao no nolazainy tamin'i Jodà: Andeha haorintsika ireo tanàna ireo, hasiantsika manda manodidina, tilikambo, vavahady ary hidiny, fa mbola tsy voahidy ny tany anatrehantsika, fa efa nitady an'ny Tompo Andriamanitsika isika; nitady azy isika, ka nomeny fiadanana isika amin'ny manodidina rehetra. Dia nanorina izy ireo ka nahefa.
7Izao no tafika nananan'i Asà: Telo hetsy miaramila an-defona sy ampinga, tamin'i Jodà; valo alina sy roa hetsy, miaramila mpitana ampinga mpandefa tsipìka, tamin'i Benjamina. Lehilahy mahery avokoa ireo.
8Fa nivoaka hiady tamin'ireo Zarà, Etiopiana, nitondra miaramila iray tapitrisa sy kalesy telon-jato, ka nandroso hatrany Maresà. 9Dia nivoaka hiady aminy Asà, ka samy nilahatra hiady teo an-dohasaha Sefata akaikin'i Maresà izy. 10Niantso an'ny Tompo Andriamaniny Asà ka nanao hoe: Iaveh ô, azonao vonjena mora foana ny malemy tahaka ny mahery, ka vonjeo izahay, ry Iaveh Andriamanitray! Fa hianao no iankinanay, ary amin'ny anaranao no nandrosoanay hiady amin'ireto vahoaka be ireto, hianao no Andriamanitray, ry Iaveh: aza haharesy anao anie ny olona! 11Dia nasian'ny Tompo teo anoloan'i Asà sy Jodà, ny Etiopiana, ka vaky nandositra ny Etiopiana. 12Nenjehin'i Asà sy ny vahoaka nomba azy izy hatrany Gerara, ka be loatra ny Etiopiana lavo ka tsy azony nantenaina ny hiarina indray, fa voatorotoro eo anatrehan'ny Tompo sy eo anatrehan'ny tafiny. Babo tsy erany no azon'i Asà sy ny vahoakany. 13Nasiany avokoa ny tanàna manodidina an'i Gerara, fa azon'ny fahatahorana an'ny Tompo ireo, ka nobaboiny ny tanàna rehetra, fa babo be dia be no tao. 14Nasiany koa ny lay, nisy ny biby fiompiny, ka nahazoany ondry be tokoa mbamin-drameva, dia niverina ho any Jerosalema izy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0108 seconds